Naafada ku nool Cadaado oo gurmad dalbanaya – Radio Muqdisho
Naafada ku nool Cadaado oo gurmad dalbanaya
Xilli lagu guda jiro tobankii ugu dambeeyay ee bisha barakaysan ee Ramadaan ayaa dadka naafada ah ee ku nool degmada Cadaado waxa ay ka cabanayaan duruufo dhinaca nolosha ah oo la soo darsay waqtigan.
C/llahi Cumar Jaamac oo ah Gudoomiyaha naafada Cadaado oo isaga qudiisu cuuryaan ah ayaa Radio muqshisho u sheegay inay naafadau la nool yihiin duruufo adag, kuwaas oo isgu jira nolol maalmeedkooda oo liita iyo qalab la’aan.
C/llahi Cumar ayaa sidoo kale sheegay inaysan naafado helin daryeel iyo waxbarasho mnaasab ku ah, bulshaduna aysan k ubaraarugsanayn gacansiinta dadka lixaadkoodu dhimanyahay. Naafada Cadaado iyo deegaanada hoos yimaada ayaan laga haynin tirakoob sax ah, mana jirto cid waxqabadkooda isu xil saartay.
Dacwad oogaha guud ee qaranka oo gaaray dalka Holand
34 Macalim oo tababar loogu soo xirey Gaalkacyo